China Wheel Spacer fekitari uye bhizimisi | Qian Iye
Ichi chigadzirwa igumbo spacer.
Ichi chikamu chinoshandiswa mumotokari mabhureki system ..
Wheel Spacers izvozvi zvinopihwa kubva ku2mm nzira yese kusvika 20mm pamwe nekuwedzeredzwa kwesarudzo itsva dze17mm uye 20mm.
• CNC-yakarukwa aluminium
• Kurema kwekuchengetedza dhizaini
• 66.5mm uye 57.1mm yepakati yakatakura masisitimu
• 5x112 bhaudhi pateni
• 2mm - 20mm saizi
• Hub-centric zvindori pane mahombe spacers
• Anodized nhema
Wheel Spacer Pair yakagadzirirwa kukwana akawanda Audi & Volkswagen mota ine 66.5mm yepakati inobereka uye 5x112mm vhiri bhaudhi mapatani. Iyo yakafara nzira inozovandudza zvakare kugadzikana kwekona uye kubata. Mavhiri spacers anowedzera track upamhi kunatsiridza kubata, bvumira kune yakawanda mabhureki clearance, uye kubatsira kuzadzikisa iyo yakawanda yekuyerera vhiri / tai kukodzera iwe yaunoda yako mota.
Kukwikwidza chaiko nekushandisa kushomeka kwekugadzira kusingagumi, zvichikonzera yakasarudzika vhiri chiyero.
Zvese zvikumbiro zvakaedzwa mukuomarara mukugara uye kuneta bvunzo.
Yakagadzirwa kubva pakakwirira simba Aluminium, iwo akakwana zvakakwana hub-centric vhiri spacers. Izvi zvakasungirirwa kumahabhu ehubhu, uchishandisa yakapihwa metric Hardware.
Yepamusoro-giredhi ngura dziviriro kuburikidza neakasarudzika ekuputira maitiro (munyu pfapfaidzo bvunzo maererano neDIN 50021)
Yakakosha uremu mukana uchienzaniswa nemavhiri-spacers akagadzirwa nesimbi.
Nekuwedzera iyo nzira yehupamhi, kwete kungoonekwa chete kunovandudzwa, asi iwe zvakare unowana hunhu hwakanakisa hwekutyaira hwakasanganiswa nekukwirisa kwepamusoro, sezvo roll yechassis inokanganiswa nenzira yakanaka.
Iwe unozowana kutaridzika kwakaringana uye kukwidziridzwa kwekubata nekufambisa mavhiri ako achimhanya pamwe nekunze kwekumusoro kwematsime emavhiri. Simply kuyera vhiri-tsime / tii mukaha, sezvakaratidzwa pano, uye kuraira inoenderana Spacers kuisa mavhiri ako nematai kunze uko kwaanenge ari.
Pashure: Turbo Muffler Bvisa
Zvadaro: Dogbone Gomo Insert